नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): विवादबाट परै बस्न खोजे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, केहिवेर कालीबाबा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच भलाकुसारी !
विवादबाट परै बस्न खोजे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, केहिवेर कालीबाबा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबीच भलाकुसारी !
"माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथमा विवाद निम्त्याएका कारण उनको रजगज धेरै दिन नटिक्ने" : कालिबाबा
पशुपतिको बनकालीमा बैसाख एक्काइस गतेदेखि सहस्र रुद्र चण्डी अखण्ड महायज्ञ चलिरहेको छ । चर्चामा रहेका कालिवाबाले महायज्ञ सञ्चालन गरेका छन् । नेपाल हिन्दु राज्य घोषित होस् भन्ने माग गर्दै
कालीबाबाको संकल्पमा सुरु भएको महायज्ञमा हजारौको सहभागिता भइसकेको छ । तर त्यहि यज्ञमा बुधवार अपरान्ह पुगे पूर्वराजा ज्ञानेन्द शाह पनि । साढे एघार बजेतिर पशुपति बनकाली पुगेर केहिवेर पुजा अर्चना गरेका थिए पर्ूवराजाले । केहिवेर कालीबाबा र ज्ञानेन्द्र साहबीच भलाकुसारी चल्यो । कालीवावाले ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा संकल्प गराएर दुइ वटा नरिवल, दुइवटा स्याउ, आधा दर्जन केरा होम गराएका थिए । महायज्ञबाट वाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीले केहि प्रश्न तेर्स्याइहाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाइ । कुटनीतिक जवाफ दिएर विवादबाट परै बस्न खोजे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह । संविधानसभाको म्याद सकिनै लाग्दा जननिरासाबाट सहानुभूति बटुल्न उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए " नेपाली जनताले समयमै संविधान चाहेका छन । " पत्रकारहरुसंँग कुरा गदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको पछिल्लो स्थीति प्रति जनता चिन्तित रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले जनताको अपेक्षा निर्धारित मितिमै संविधान लेखियोस् भन्ने रहेको समेत बताए । राजसंस्थाको औचित्यवारे सोधिएको प्रश्नमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफु यसबारे अहिले नै केहि नवोल्ने स्पष्ट पारे ।
गत वर्षजस्तो यसपटकको महायज्ञमा राजनीतिक नेतृत्वको भने उपस्थिति नभएपछि कालिबाबा भने रुष्ट बनेका रहेछन्, उनले नेताहरुप्रति आक्रोश पोखे सँगै नेपालमा हिन्दुराज्य संबैधानिक हिसावले कायम गर्न भारतको पनि प्रत्यक्ष सहयोग भएको पनि बताए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथमा विवाद निम्त्याएका कारण उनको रजगज धेरै दिन नटिक्ने बताए कालिबाबाले । महायज्ञ स्थलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुग्नु अगाबै शिवसेनाका सदस्यहरुले राजसंस्थाका पक्षमा नारावाजी गरेका थिए । सहस्र रुद्रचण्डी महायज्ञमा एघार वटा छुट्टाछुट्टै स्थानमा यज्ञ कुण्ड बनाई होम गरिएको छ । हिन्दु राज्यको पक्षमा दवाव दिने उद्देश्यले एक्काइस गते सुरु भएको महायज्ञ बिहिबार सम्पन्न हुँदैछ ।।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिन्दु राज्यको आश अझै मरेको छैन । हिन्दु राज्यको माग गर्दै उनले पशुपतिको वनकालीमा कालीबाबाले गरेको सहस्र रुद्रचण्डी महायज्ञमा पुगी पूजाअर्चना गरेका छन् । आफ्ना समर्थकसहित पशुपति पुगेका उनले नरिवल र फलफुल चढाएर होम गराएका थिए । त्यहाँबाट बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनताले शान्ति र स्थिरता चाहेको बताए । उनी जाने र र्फकने क्रममा शिव सेना नेपालका कार्यकर्ताले 'हाम्रो राजा हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ' जस्ता नारा लगाएका थिए । नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने योजनामा २१ गतेबाट कालीबाबाले शुरु गरेको सहस्र रुद्रचण्डी महायज्ञ भोलि सकिनेछ ।
फर्किनेक्रममा पशुपति क्षेत्रमा पूर्वराजाले घुमाउरोगरी दलहरुप्रति ब्यंग्य पनि गर्न भ्याए । 'जनताले सवै बुझेका छन्,' सञ्चारकर्मीसितको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा उनले भने, 'परिस्थिति कठीन छ, जनताले शान्ति खोजेको छ, स्थिरता खोजेको छ ।' नयाँ संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि ज्ञानेन्द्रले 'जनताको नाममा' असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 'जनताले राम्रो र भरपर्दो दस्तावेज (संविधान) खोजेका छन्,' उनको भनाइ थियो । राजतन्त्र फर्कने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा ज्ञानेन्द्रले भने, 'अहिले यस्ता कुरा नगरौं ।' मुलुक हिन्दू राज्य होस् भन्ने संकल्प गर्दै कालीबाबाले सहस्र रुद्रचण्डी महायज्ञ सुरु गरेका थिए । कालीबाबाले अघिल्लो वर्षमा झैं राजनीतिक दलका नेताहरु महायज्ञमा नआएकोमा आक्रोश पोखे । 'तीन वर्ष नेताहरुसँग 'कम्प्रोमाइज' गर्‍यौं,' उनले भने, 'अब 'कम्प्रोमाइज' हुँदैन, सारा हिन्दूहरु उत्रिसके, हामीलाई ०४७ सालको संविधान चाहिन्छ ।' भारतमा नै बस्दै आएका कालीबाबाले हिन्दू राज्यको मागमा भारतकोसमेत समर्थन रहेको दाबी गरे ।